Ciidamo Tigree ah oo soo dagay deegaanka Sariiraale ee Xadka Hiiraan iyo dhaqaaq Milatari oo ka soconaya Feer Feer. | Halganka Online
Ciidamo Tigree ah oo soo dagay deegaanka Sariiraale ee Xadka Hiiraan iyo dhaqaaq Milatari oo ka soconaya Feer Feer.
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Ciidamo aad u fara badan oo Tigree ah ay soo buuxiyeen shalay gelinkii dabe ilaa xalay deegaan lagu magacaabo Sariiraale oo ku yaalla xududka Gobolka Hiiraan uu la wadoogo dalka Itoobiya.
Iyadoo ay Ciidamadasi soo galeen deegaankaasi ayaa hadane warar kale waxay sheegayaan in dhaq dhaqaaq Milatari oo xoog leh ay Ciidamo kale oo Tigree ah ka wadaan deegaanka Feer Feer halkaasi oo laga yaabo in ay uga soo dhaqaaqaan deegaano kale oo kamid ah gobolka Hiiraan.
Ciidamada Tigreega ayaa gacan siinaya Maleeshiyada Xukuumadda Sh Shariif waxaana ay mar waliba dhaqaaqaasi Milatari sameeyaan marka laga awood roonaday maleeshiyadaasi iyo kooxaha Qubuura Galeenka ee ay iskaashanayaan.
Dadka ku dhaqan hareeraha deegaanka Sariiraale ayaa aad kaga cabsanaya ciidamada Tigreega ah ee soo dagay goobtaasi, waxaana jirta sidoo kale in ay waddooyinka deegaankaasi soo istaageen iyagoo gaadii dagaal sita si ay u kormeeraan dhaq dhaqaaqa dadka deegaanadasi.
Gobolka Hiiraan ayaa muddooyinkii u danbeeyay ka jireen xiisado dagaal oo kuwi ugu danbeeyay ay ka dhaceen magaalada Baladweyne halkaasoo si xun loogu riiqay Maleeshiyaadkii Dabageed iyo Qubuura Galeenka iyadoona hadda ay magaalada gacanta ku hayaan Xisbul Islaam iyo Al-Shabaab.
« Ciidamada Difaaca Cirka Wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka oo shalay gantaallo ku beegsaday diyaarad jawwi hoose ku dulmartay magaalada Kismaayo. Gen.Galaal oo xaqiijiyay in ay iskaashanayaan Qubuura Galeenka iyo Tigreeda si ay u wajahaan Shabaabul Mujaahidiin. »